मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला, के हो बास्तविकता ? - SINDHULI SAUGAT
SINDHULI SAUGAT NEWS NEWS UPDATE POLITICS SPECIAL मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला, के हो बास्तविकता ?
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला, के हो बास्तविकता ?
सिन्धुली सौगात डटकम प्रकाशित समय 1:38 AM
काठमाडौं १९ असोज– प्रमुख सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसंग चुनावी तालमेलको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला चलेको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने त्यस्तो कुनै तयारी नगरेको उनका सहयोगीहरुले बताएका छन् ।
देउवा निकट नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा प्रकाश शरण महतले सरकार पुर्नगठनको बिषयमा कुनै कुरा नभएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुरा हल्ला मात्र हो, त्यसबारे केहीपनि छलफल भएको छैन’ महतले बिहीवार भने ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार साझ भएको ६ दलको बैठकपछि देउवा सरकार नढल्नेमा ढुक्क जस्तै देखिएका छन् । ‘माओवादीले सरकारबाट बाहिरिएपनि सरकारसंग बहुमत कायम रहन्छ, आत्तिनु पर्ने अबस्था छैन’ देउवाले बिहीवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय सम्पादन समितिको बैठकमा भनेका कांग्रेसका अर्का एक नेताले बताए । देउवाले सरकारको पक्षमा ३ सय भन्दा बढी सांसदको समर्थन रहेको बताएका थिए ।
बुधवार भएको बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम र यसअघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको कमल थापा अध्यक्ष रहेको राप्रपाले समेत सरकारलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी मन्त्री हटाएर राप्रपा र फोरमलाई सरकारमा लैजाने तयारी गरेको भन्ने हल्ला बाहिर आएको थियो । तर संसदीय व्यबस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्न नमिल्ने जानकारहरु बताउछन् । मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेमात्र प्रधामनन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्छन् ।
‘उहाँहरुसंग कसरी चुनावी तालमेल गर्ने भन्ने बिषयमा मात्र छलफल भएको छ, सरकारम सहभागितको बारे कुनै कुरा भएको छैन’ महतले भने ।
माओवादीले पनि सरकारबाट नहट्ने भन्दै चुनावी तयारीमा लाग्न प्रधानमन्त्रीलाई आश्वासन दिएको थियो । लोकान्तरबाट